Uqikelelo: ukutshixwa kwezinto ezingxamisekileyo ukuthintela i-coronavirus (uqoqosho oludiliziweyo olulawulwayo kunye nokuphangwa): Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Matshi 2020	• 17 Comments
Ndiyathemba ukuba sizakubona "umthetho weemfazwe" (okanye "imeko yongxamiseko" uvalwe) kule veki. Kukho ithuba lokuba oku kuyakwenziwa phantsi kokuyalelwa kwe-EU. Oku kuthetha ukuba wonke umntu kulo lonke elaseYurophu kufuneka ehleli ngaphakathi, sizakubona iindawo zokuhlola amajoni kwaye nabani na ongazinxibiyo ngemaski kwaye engenamvume yokuhamba, uya kunyanzeliswa ukuba abekwe yedwa ekhaya okanye athathwe (ukuba akasebenziswanga).
Elona lithuba lilungileyo lokuba oku kuhamba kunye nokwaziswa kwe-smartphone app, njenge China waziswa. Ngale nto unga okanye ungavumeli abantu basebenzise isitalato ngasinye kunye nesithili ngasinye okanye ivenkile. Ukuqokelela idatha enkulu ngemakrofoni kunye nekhamera ukusuka kwii-smartphones kunye neewotshi ezifanelekileyo, ungabukela kwaye umamele ukuba ukhohlela kakhulu, umzekelo, kodwa iipateni zokuhamba kwakho kunye neencoko zinokuba zizinto ezinokuthatha isigqibo.
Lindela nje ukuba kanye xa inkqubo enjalo isebenza, iyakufumana isigxina. Wamkelekile kwisimo samapolisa.
I-coronavirus yeyona alibi efanelekileyo yezithintelo kwinkululeko, ukutshitshiswa kwemali, ukunyanzela ukugonywa kunye nokunyanzelwa ukwamkelwa.
ICoronavirus yayiyeyona nto idodobalisayo ukudodobalisa uqoqosho, ke ngoko unokulufumana udubulo olunokwenzeka phantsi kwesikhokelo sokuthintela intsholongwane.
Nceda ufunde kwakhona eli nqaku Ukufumana amandla apheleleyo e-PsyOp coronavirus.
'Iyonke into ibubblemsgstr "" "I-bubble ephezulu yezulu eyakhiwe ngamabhanki angaphakathi, ibonakalise ngaphandle kwamathandabuzo ukuba kuya kubakho ingxaki enkulu. Besendiqikelele ukuba iminyaka kwaye oku kugxothwa njengokungakhathali iminyaka. Intsholongwane (mhlawumbi eyakhelweyo) ngoku iqinisekisa ukuba abantu sele bebanjiwe kwimimandla ngaphambi kovalo.
Ulindelo lwam kukuba uqoqosho luya kudodobala. Oko sele kuqhubeka. Nasiphi na istokhwe sokuthengiswa kwesitokhwe siyinto nje ebubuvuvu kwaye isisiphumo sezigidi zeedola zichithwa ziibhanki eziphambili kunye nokuthengwa kweephakheji zokwabelana ziinkampani ezifumana loo mali yasimahla.
Oosomashishini abaninzi abancinci, iinkampani ezininzi kunye nabasebenzi baya kunqwenela. Ngokuqinisekileyo iishelufu azinanto, kuba izinto ziyauma ngenxa yeenkampani ezivelayo eziwela kunye nabahanjiswa.
Nangona kudala ndixela isiphithiphithi eYurophu kangangeminyaka, kanye njengokuwa kwamandla edola kunye ne-hegemony ye-US, indlela ebukrelekrele kakhulu ifunyenwe ukuba ikwazi ukuqaphela la chaphaza kwangoko, ngale ntsholongwane ye-corona. Iyaqinisekisa ukwandiswa kwakhona kwemimandla kunye nezithintelo kwaye ke inokucothisa ukunciphisa. Kwaye xa ndithetha 'ngabantu', ndithetha ukuba abalawuli behlabathi abalandela iskripthi esikhulu.
Ngaphandle kwento yokuba i-coronavirus sele iqinisekisa ukuba abantu kufuneka bahlale kwimimandla kwaye abanako nje ukusuka ku-A ukuya ku-B, isiphithiphithi siya kugqabhuka. Abantu abalambayo abanakumiswa. Vuliwe 29 Matshi 2019 Ndabhala:
Ngokuqinisekileyo isiphithiphithi silandela kuqala; isiphithiphithi esikhulu. Isiphithiphithi sezemali kunye noluntu, kuba ngokuqinisekileyo kuya kubakho ukunqongophala okukhulu, amashalofu angananto. Ngaba siyawafumana amazwe aseVenezuela? Ayizukundothusa…
Ngethamsanqa, umkhosi wamaMelika ulungile eVlissingen. Aba basebenzi basemkhosini abangama-20.000 baseMelika kulindeleke ukuba bancede ekugcineni imeko elindelekileyo kaxakeka. Bafike ngokusemthethweni kwi-Defender Europe 2020 yokuzivocavoca eJamani. Umthambo sele ibekiwe ngokunxulumene nentsholongwane. Ukudibana akukho.
Okwangoku, gcina iliso kwiTurkey, kuba bendihlala ndibikezela ukuba iTurkey ibhlokhi yamandla enkulu elandelayo. Imeko yonxunguphalo iya kuncipha, kodwa ndiyakholelwa ukuba iTurkey iya kulandela kwaye ithathe i-EU. Funda ngaphakathi eli nqaku Ndiphinde ndifumane 'njani kwaye kutheni' kwaye ndifunde incwadi yam ukuze ndazi iskripthi esikhulu. Ewe, singqina iskripthi master. Yonke into icwangcisiwe kwaye isiphelo seskripthi sisibonile.
Unokwenza ntoni kumaxesha anzima azayo? Ukuqonda oko, kuya kufuneka uqale ngokuhamba ngombhalo omkhulu. Emva koko uyazi ngokuqinisekileyo into efunekayo kunye neyimfuneko. Andikwazi ukuyicacisa kwinqaku elinye, kodwa ndiyicacisa kakhulu kwincwadi yam. Ke ngoko, funda loo ncwadi. Ungayifunda emva kwemini. Lixesha lokuba uyibone.
Ngaba sijamelana neengxaki ezinzulu?
Inkxaso yeKhabhinethi yokumelana ngokuthe ngqo kwiSiriya, kodwa asiyazi ukuba ngubani '
tags: 20.000, belegen, intsholongwane ye-Corona, okhuselayo, EU, Europe, iYurophu, eziziimbalasane, Amazing, majoni, imeko yongxamiseko, wombuso, amabutho, turkey, van, Ukubhabha
15 Matshi 2020 kwi-17: 43
Utshintsho lwenkcazo yobhubhane ka-WHO kunye ……… nobhubhane!
15 Matshi 2020 kwi-18: 18
Intsholongwane kaCorona eyaziwa ngo-2012!
15 Matshi 2020 kwi-18: 59
Imeko oyichazayo ibonakala iyenzeka ngokuqinisekileyo. Ngaba "iilluminati" ekugqibeleni bayayifumana indlela yabo, iphupha elimanzi? Ngapha koko, sihlala kwindawo yobuzwilakhe, egqithileyo. Funda kwiphepha-ndaba lesizwe le-brainwash ukuba ubulungisa bezolwaphulo-mthetho bufuna ukuba amagqwetha avale iinkundla !!!. Akukho zinkundla, akukho mthetho. Kwimeko enjalo kuyacaca ukuba amagqwetha ayelolwarhulumente kuphela.
Ngaba awuboni uqhankqalazo, ungevi uqhanqalazo, lwuphi uphikiso? Into engalunganga kulo mhlaba wamakhoboka.
Ngaba intsholongwane ivavanya ukungavuthwa kwamanzi, okanye ngaba impendulo kufuneka ingacacanga ukuzithethelela? Ngaba singacela uvavanyo lwentsholongwane ukuba sifuna? Ziphi i whistleblowers? Wikileaks? Yintoni ehlekisayo.
15 Matshi 2020 kwi-19: 59
@ ukukhanya kwelanga
Yile nto kanye ebeyithetha uMartin ngaphakathi nangaphandle iminyaka kwaye siyavuma apha.
Iprotheyini yinyani ngento ebizwa ngokuba yintsingiselo.
Inkcaso inkohliso kwaye iyalawulwa
Ii-NGOs zinesitokhwe esikhulu sebhotolo entloko kuba zenza ngathi kunokubakho uqhankqalazo neenkampani zosasazo (Amnesty, Unicef, Greenpeace kodwa nje ngeFNV, njl. Njl.)
Kufuneka sitye emva koko intolongo engabonakaliyo iyinyani.
15 Matshi 2020 kwi-19: 39
Olu “qhushumbo lwekorona” lusenokuba luvavanyo lobunjineli kwezentlalo. Uvavanyo apho iingcali zifuna ukuvavanya ukuba ngaba abantu kwiNtshona yeHlabathi VOLUNIKIWE kwaye ngokwenxenye bayo bayokuvalwa oko. Ngoku sibona ukuvalwa ngokupheleleyo eNetherlands nakwamanye amazwe e-EU, kodwa nase-US, apho yonke into ivala ngendlela "yokuzithandela" efanayo, kwaye wonke umntu uyacelwa ukuba akhe ekhaya. Kwakhona oku akwenziwa ngokunyanzeliswa kodwa ngokuzithandela nangokobuqu.
Olu luvavanyo ukubona ukuba abantu basabela njani kwaye ukuba kwaye kude kangakanani bahambisana nayo. Ngaba bayayilandela imiyalelo? Ngaba bayakwenza oko bakuxelelweyo? Ngaba bazibeka phantsi kolwazelelelo njengo "Bhuti omkhulu" ubuza / ufunwa ngabo? Ngaba ziyahamba ne-hype “distancing yentlalo” apho, ngokufutshane, wonke umntu ecelwa ukuba angahambi nabanye abantu? Ukungahambeli yonke imicimbi, imitshato, imingcwabo. I-TEstrun okanye ayiyi kubona, kubonakala yomelele kakhulu ukuba uninzi lwabantu luhamba kunye nayo.
"Inkqubo yokuxela kwangaphambili" sisixhobo "sesibini esidla ngokuqikelela ngeziganeko ezizayo kwixesha elidlulileyo ezincwadini, ngeefilimu, amanqaku okanye amaqweqwe erekhodi, njl. Njl. Le yimeko, umzekelo, ngencwadi ethi 'Iliso lobumnyama' nguDean Koontz. Le ncwadi yi (njengoko sele ikhankanyiwe kule ndawo kwinqaku) malunga nentsholongwane ebizwa ngokuba yi-Wuhan-400.
15 Matshi 2020 kwi-20: 32
Kule meko ayisivavanyo. Baluvavanye ngokubanzi u-'Ngxaki, ukuSabela, ukuSombulula 'kwaye bayazi ukuba abantu bazokwamkela ngokuzithandela onke amanyathelo kwaye bangaqondi ukuba babanjisiwe.
Jonga iChina. Phantse akukho namnye uqhasayo. Bayazi ukuba isebenza ngokudala kuqala ingxaki sham, emva koko ukudala uvalo kwaye ke wazise amanyathelo.
Ngamafutshane: ithuba lokuphumelela li-100% kwaye xa abantu besoyikeka, bayazi nokuba abo bantu bakhwaza becela uncedo kwimeko enye eyoyikisayo.
Ubuntu bebonke bungaboni.
16 Matshi 2020 kwi-10: 45
Le yingxaki enkulu kwihlabathi liphela, ukusabela, umcimbi wesisombululo. Ngale ngxaki ye-sham, i-elite inokungena phantse kuzo zonke izinto ze-NWO ze-ajenda ngaphandle kweengxaki, ezihlala ziziswa kancinci kancinci nge-Hegelian dialectics.
Ewe, enye yeengxaki eziphambili kukuba xa uthe wacula ngokuchasene "namanyathelo ekhoroni" wenza ukuba isihlwele sonke sichasene nawe, kuba wonke umntu uyoyika kwaye ubenenjineli ukuba) bajonge abasemagunyeni ukufumana isisombululo kunye b) Ndifuna urhulumente azise awona manyathelo afike kude (abantu banomsindo omkhulu, umzekelo, urhulumente wase-NL akakabhengezi imeko yongxamiseko)
27 Matshi 2020 kwi-12: 15
Okanye abantu bayakuthi, thatha umzekelo ovela kwiiPhilippines (ungalawuleki, kunjalo), kwaye ukhusele abantu kwizikhephe ukuba abathobelanga.
Ezo zinto zithambile zisezantsi apha. (Umdlalo omdaka kakhulu osasazwa yi-media, BAH)
15 Matshi 2020 kwi-21: 46
Kubonakala ngathi kancinane ngokukhohliswa? Jonga umfanekiso ...
Andazi nyani ukuba i-ajenda yesini izakubuya kwakhona apha ... kodwa Josh .. "Ndinesifo se-corona virus" ewe
I-QuarANTAINE // Le nto yayothusa kakhulu: I-Nick zombini ndivavanyelwe i-COVID-19 kwaye ndinokuqinisekiswa ngokusemthethweni ukusukela ngoLwesibini. UAvond ngoMvulo ngokuhlwa uNick wayengonwabanga; waya eba nexhala kwaye ekugqibeleni kwafuneka ndibize i-ambulensi. Wasiwa esibhedlele kwaye waphandwa ngakumbi wavavanywa apho. Emva kokuziva ngcono malunga neeyure ezimbalwa kamva, wavunyelwa ukuba abuyele ekhaya. Ukuba kwicala elikhuselekileyo, uvavanyo lweCorona ekugqibeleni lwathatyathwa, kodwa oogqirha ngokwabo babonisa ukuba oku akunakulindeleka kakhulu. Nditsho nogqirha kwezonyango e-ICU babenxibe imaski yobuso. Xa sifumene iziphumo zovavanyo kusuku olulandelayo, kwavela isimanga sethu sokuba uNick wosulelwe yintsholongwane ye-corona. (Nangona singakhange sikwindawo ezinomngcipheko.) Ngosuku olulandelayo, ngolwesithathu odlulileyo, mna no-Alexis savavanywa. Ngethamsanqa, uAlexis akazange asuleleke, kodwa iziphumo zam beziqinisekileyo. Khange ndibenomkhuhlane omkhulu kwaye ndiziva ndilungile phantsi kweemeko. NgoLwesibini nangoLwesithathu bendinomkhuhlane, kodwa ngoku kulungile kwakhona. UNick ukwangcono. Sisonke senza konke esinako ukukhusela iAlexis kwaye silandele zonke izikhokelo ezicetyiswa nguGGD. UAlexis uyakonwabela ukuba sekhaya imini yonke nomama kunye notata. G GDD uqhagamshele wonke umntu ebesikhe sanxibelelana naye kwiintsuku ezidlulileyo. Ndaye ndanomnye umsitho ngeCawa ngoMvulo, ke i-GGD yayifuna ukwazisa wonke umntu ukuba aphephe ukothuka. Kuba ndingakhange zibonise zimpawu ngelo xesha, ithuba lokuba umntu wosulelwe ngam lincinci kakhulu. Ngokuphathelene noku, sixhomekeke kuluvo lwe-GGD. Mna noNick sijonga ekubeni ngcono nasekunyamekeleni uAlexis. Ndiyihlonipha kakhulu i-GGD nabo bonke abantu abakhathalelo lwempilo. Ngoku sonke sibafuna kakhulu okona kubi. Ke kufuneka ulumke ngakumbi kwaye uthathe imeko nzulu. Sebenza ekhaya ukuba uneempawu zomkhuhlane kwaye ubize ugqirha wakho okanye i-GGD ukuba ziba mandundu. Ndilindele ukuba urhulumente athathe amanyathelo aqatha kungekudala, kuba kunyanzelekile ukuba siphephe ukunyuka kwezibhedlele! (Jonga amabali) ❤️
Umyalezo owabelwana ngawo IINDLELA ZASEKHAYA JOSH (@joshveldhuizen) kwi Mar 15, 2020 ngo-6: 27 kusasa (PDT)
15 Matshi 2020 kwi-22: 20
I-logo entle kwi-t-shirt 🧭
15 Matshi 2020 kwi-22: 23
Ngubani ikhampasi yakho?
I-intuition yakho okanye uyayikhangela ngaphandle ngokwakho? Oku kuzakwenza umahluko kweli xesha siphila kulo.
15 Matshi 2020 kwi-22: 12
Ukuhlwayela uloyiko ngokusebenzisa ubuso obuqhelekileyo kuhlala kusebenza kakuhle
16 Matshi 2020 kwi-11: 07
Kwimeko yokwenyani ngentsholongwane eyingozi ngokwenene, ngebenokuthi bayicimile le Defender2020 kwiveki ngaphambili….
khawuleza ushiye inani 'elingaziwayo' lamajoni ukuya elunxwemeni aze awenze abhabhe ...
16 Matshi 2020 kwi-13: 34
Uhlelo lokusebenza olubhengezwe nguMartin sele likhona kwaye kungekudala luzakwandiswa ngokubhekele phaya ekusebenzeni / kolawulo:
Okwangoku, abantu abancinci abasacinga ngokuthantamisa kufanele ukuba boyike ngakumbi. Qaphela ukungabhekisi ngokufihlakeleyo kumkhuhlane waseSpain:
16 Matshi 2020 kwi-20: 39
Babona ukuba iZalminblik sele iyithelekisile le. Kwakhona kwafuneka ndicinge kwangoko ngebhokisi yamazambane apho uDen Uyl emi edamini apho idrivelwayo
Ioyile yayingasayi kubakho kwakhona kwikamva elibonakalayo
Abadlali bePur Sang, wonke umntu
16 Matshi 2020 kwi-20: 41
Thelekisa iDen Uyl kunye noRutte kwiTV kwi-16-03-2020
16 Matshi 2020 kwi-22: 44
Enye yeenjongo eziphambili mhlawumbi kukuba bafuna ukusikhupha. Oku kuthetha ukuba 'isitofu sokugonya' sele silungile ixesha elide. Benza ngathi abekho. Ewe kona akufuneki sazi ukuba yintoni kanye kanye kuloo 'chiza'. Ewe, ukuba uthenga iqhekeza lesonka okanye enye into, umbhaki / umvelisi kufuneka achaze eyona nto iquletheyo ngaphandle 'kogonyo'? Nceda ungabuzi imibuzo enzima.
Ilizwe elithile sele lilungiselele 'ugonyo'. Mhlawumbi 'intsholongwane' nayo yaveliswa? Ndiyazibuza, ngelishwa, ukuba usapho lwasebukhosini oluthe phesheya lusazimisele ukungena eNetherlands ngayo yonke loo nto 'intsholongwane' ebithwele (ngokunokwenzeka) abantu abaqhelekileyo. Ngaba babonisa i-guts xa bebuyile okanye ngesele sele befumene isitofu sokugonya ukuze bangasulelwanga ngabantu ngokubanzi? Zimbi kakhulu azikabuyi ukukhuthaza kunye nokuthuthuzela abantu abaqhelekileyo. Ndicinga ukuba bakhangele phambili kuloo nto, ukwazi abantu abaqhelekileyo. Ndiqhelekile ngeentsuku zobumnyama indlu enjalo yasebukhosini.
Ndiqinisekile ukuba indlu yasebukhosini iza kunceda abantu abaqhelekileyo. Konke kuseza. Umonde.
« Ingxoxo yemidiya yoluntu: isixhobo sokwamkela amanyathelo abekwe ecaleni kukarhulumente?
UMartin Vrijland wavavanywa ukuba une-coronavirus covid-19 »
Utyelelo lulonke: 2.461.471